Ukusasazwa koMculo kwikhompyuter yethu nge-OnAir | Iindaba zeGajethi
OnAir, eyona ndlela yokumamela umculo kwizixhobo ezahlukeneyo zeselfowuni
Uninzi lwe Ezinye iindlela zikhona namhlanje kwi-Intanethi xa kufikwa ekuphulaphuleni umculo osasazayo, imeko ethathwa njengenye yeentandokazi kubantu abaninzi abaye bafumana iiradiyo zabo abazithandayo kwi-Intanethi. Olunye uhlobo olongezelelekileyo kwezi ntlobo zemisebenzi, singayisebenzisa nge-OnAir, isicelo esivumela ukuba sabelane ngeengoma kwindawo efanayo yomntu okanye yabucala yenethiwekhi.
I-OnAir yenza ngokungafaniyo nezinye iinkonzo zomculo zokusasaza ekhoyo kwimarike, kuba esi sicelo sinokusinceda sidibanise ilaptop yethu (okanye i-desktop) ngezixhobo ezahlukeneyo zeselfowuni esinazo. Nje ukuba ikhonkco lenziwe (injongo yeli nqaku), umsebenzisi angalawula iikhompyuter apho umculo uya kuva khona obekwe kwindawo ethile, le ibe yindawo yediski yendawo, intonga ye-USB okanye indawo enye yokugcina. yesixhobo esiphathwayo.
1 Faka kwaye uqwalasele i-OnAir kwikhompyuter yeWindows
2 Faka kwaye uqwalasele i-OnAir kwithebhulethi ye-Android
Faka kwaye uqwalasele i-OnAir kwikhompyuter yeWindows
Emoyeni Iyafumaneka kuzo zombini iiWindows, iiMac okanye iiLinux iikhompyuter kunye nezixhobo zefowuni ze-Android; Siza kuphakamisa njengomzekelo, ukubakho kokukhuphela kwi Emoyeni Kwikhompyuter yethu yobuqu yeWindows.
Siya kwiphepha elisemthethweni le- Emoyeni.
Cofa kwikhonkco eliza kusivumela ukuba sikhuphele uguqulelo lweWindows.
Emva kokukhuphela, siyaqhubeka nokufaka isixhobo.
Siya kucelwa ukuba sihlaziye kuhlobo lwamva lweJava Runtime.
Ngala manyathelo alula siza kube sele sifakelwe Emoyeni Kwikhompyuter yethu (kule meko, kunye neWindows), kufuneka sisebenzise isixhobo ukufumana isikrini esingenanto. Ngethuba lokuqala xa sibona olu nxibelelwano luya kuba ngoluhlobo, oko kukuthi, isikrini apho saziswa khona ukuba azikho iingoma ezikhoyo ngelo xesha.
Kungenxa yokuba asikaphakamisi isixhobo, indawo kunye nendawo apho zikhona iingoma zethu; Ukuyicombulula le nto, kufuneka nje ucofe ifoto yeprofayile ebekwe kwicala elingasekunene, eliya kuthi linyuse iwindow eyongezelelweyo.
Kuyo kufuneka sikhethe iingoma sisebenzisa ukhetho "Yongeza uMculo", Ukuvula kwakhona enye iwindow efana kakhulu nefayile ekhangela umhlaba kwaye apho, kuya kufuneka sifumane indawo ngqo ezikuyo ezi ngoma zomculo.
Kwinguqulelo yedesktop (esiyihlalutya okwangoku) i icon encinci eluhlaza okwesibhakabhaka ebonakalayo, eya kuthi nqakraza kwimouse yethu uku-odola, izixhobo ezinegalelo kwiingoma kwi-hard drive yethu kunye njalo njalo, inokuviwa kubo.
Faka kwaye uqwalasele Emoyeni kwithebhulethi ye-Android
Into ekufuneka siyenzile kuqala kukuya kwivenkile yeGoogle Play nakwinjini yokukhangela ngaphakathi, beka igamaEmoyeni«, Ukubonisa iindlela ezizezinye kwiziphumo zabo.
Inguqulelo esinoxanduva lokuyikhetha yile iblue enesithonjana esifana kakhulu nonxibelelwano ngaphandle kwamacingo kwaye esiqaqambise ngombala obomvu.
Nje ukuba esi sicelo sikhethwe, kufuneka siyifake ukuze emva koko siqale ukumamela iingoma ngokusasaza, ezibekwe kwikhompyuter yethu ngokungathi siserver efini.
Emva kokuba sikhuphele kwaye sifaka EmoyeniEkuqalisweni kokuqala kwesicelo, iwindow iya kuvela apho kuphakanyiswa khona ukuba ubhalise kwinkonzo; Ukuthintela ukuba sigcwalise ifom yedatha, singasebenzisa inethiwekhi yethu ye-Facebook okanye iGoogle +.
Senza inkqubo efanayo noguqulelo lwe desktop yeWindows, eli ingumzuzu wokukhankanya ukuba zombini zikwinguqulelo esele ikhoyo nakule yangoku (ye-Android) ikhonkco kufuneka lenziwe kwinethiwekhi efanayo yoluntu (kwimeko apho sikhethe le ndlela yokubhalisela). Oko kukuthi, ukuba ingxelo yedesktop siyadibanisa Emoyeni NgeGoogle +, kwinguqulo ye-Android kufuneka sinxibelelane neakhawunti efanayo kwinethiwekhi yoluntu.
Nje ukuba izixhobo zombini zilungisiwe, kuyo nayiphi na kwezi zidityanisiweyo, unokumamela iingoma ekwabelwana ngazo Emoyeni.
Umphuhlisi we Emoyeni icebisa abasebenzisi beli sixhobo ukuba unxibelelwano olufanelekileyo lwe-Intanethi kufuneka lusetyenziselwe ukunqanda ukuma okomzuzwana xa umamele umculo; Ikwacebisa ukusebenzisa (kangangoko kunokwenzeka) uqhagamshelo lweWi-Fi, ukunqanda ukuchitha idatha enokuthi igqithiselwe kwizixhobo eziphathwayo.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Ezinye iindlela zokuphulaphula umculo osasazayo
Ukukhuphela - OnAir
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » OnAir, eyona ndlela yokumamela umculo kwizixhobo ezahlukeneyo zeselfowuni
Umkhupheli weVuze Torrent: Khuphela iifayile zeTorrent kwi-Android
UTweedle, umxhasi we-Twitter we-Android